Ememe Nri kacha elu
Ezinụlọ, di na nwunye, ulo
N'afọ a, oria ojoo nke Covid-19 ga-ahụ ịrị elu nke ọnụnọ ka ndị njem Irish na-agbanwe ezumike na mba ofesi maka ezumike dị nso n'ụlọ. Ememe ezumike onwe onye na -enye ndị ọbịa mgbanwe iji hazie kalenda ezumike, menu na mmefu ego ezumike ha. N'ịbụ nke dị naanị otu awa site na Dublin, Kildare na-enye ọtụtụ ebe obibi onwe onye site na ụlọ ezumike ezumike, ruo ebe obibi na ogige ntụrụndụ. Ebe a n'ime Kildare na-enye gị nhọrọ nri kacha mma nke mpaghara:
Lodges Castle nke Kilkea
Ndị dara oké ọnụ Kilkea Castle Estate & Golf Resort dị na Co. Kildare ma malite na 1180. Ọ dị naanị otu awa site na Dublin ma bụrụ akara dị mkpa na akụkọ ntolite Irish. Killọ Kilkea bụbu ụlọ FitzGerald, Earls nke Kildare, mana taa ọ bụzi ụlọ nkwari akụ mara mma nke nwere ọmarịcha ihe omimi nke nnukwu ụlọ nke narị afọ nke 12. Ejiri ọmarịcha na ụdị ọmarịcha ụlọ chọọ ụlọ Kilkea dị njikere ịnabata ndị ọbịa si gburugburu ụwa nnabata nnabata Irish na -ekpo ọkụ. Nakwa ụlọ ime ụlọ 140 dị, Kilkea Castle na -enye ụlọ nri onwe onye nke bụ ihe ngwọta zuru oke maka ịnọrọ onwe ya na ezinụlọ ma ọ bụ onye ị hụrụ n'anya. Enwere ụlọ ime ụlọ abụọ na atọ dị ha niile nwere ọnụ ụzọ mbata yana ịnweta ohere zuru oke na ogige 180-Resort.
Gaa na: www.kilkeacastle.ie
Kpọọ: + 353 59 9145600
Ashwell Cottages Nri onwe onye
Ụlọ nri Ashwell onwe ya bụ kpakpando 4 gosiri Fáilte Ireland kwadoro ihe onwunwe dị n'ime obodo mara mma nke Johnstown Co. Kildare. Ụlọ a dara oké ọnụ na -ehi ụra mmadụ isii ma nwee ụlọ ihi ụra atọ na kichin zuru oke. Ebe obibi onwe onye a dị naanị kilomita atọ site na obodo Naas na -eme mkpọtụ ma bụrụ ebe zuru oke maka ịgagharị ọmarịcha mpaghara Kildare. Ọ dị nso na ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ offeringụ offeringụ na -enye ọrụ ịwepụ, ebe nkiri dịpụrụ adịpụ na ụzọ ije na ịgba ígwè. Nwee obi ụtọ na mgbede ọkọchị na ọkụ na -emeghe n'ime ụlọ ma zuru ike na ịdị jụụ nke ime obodo ma ọ bụ jiri ụkwụ gaa mgbede n'okporo ụzọ obodo mara mma n'ime obodo. Ulo gụnyekwara igwe ịsa ahụ na igwe nkụ, igwe efere efere na TV agba. A na -enye akwa akwa na akwa nhicha n'efu.
Gaa na: www.ashwellcottage.com
Kpọọ: 045 879167
Ogige Stable na Burtown House & Gardens
Burtown bụ nnọọ obe n'etiti akụkọ ihe mere eme, ihe nketa, ubi, nka na ihe ọkụkụ na -emepụta kwa oge ozugbo site n'ubi. Na Burtown, ha na -anụ ọkụ n'obi maka ihe ha na -eri na ebe o siri bịa, na mgbe ha na -anọ na Burtown ndị otu ahụ na -atụ anya ịkwali, izu ike, kporie ndụ ma mee ka ahụ dị gị mma. Ụlọ Stable Yard dị n'ogige ogige nke kwụsiri ike, edobere n'ime ala nke Burtown House na Gardens mere eme. Quakers wuru ya na 1710, ọ bụ otu n'ime ụlọ abụọ dị na Kildare site na narị afọ nke 18 nke erebeghị. Ụlọ Stable Yard dị mma maka mmadụ 6 na -anọ n'ime ụlọ atọ. Enwere nnukwu ụlọ ịsa ahụ abụọ nwere ụlọ ịsa ahụ nwere ngwụcha okpukpu abụọ nwere nnukwu mmiri ịsa mmiri, yana akwa mkpuchi dị n'okpuru ala. Ndị ọbịa nwere ohere ịbanye n'ubi niile, yana ogige ogige, ogige tenis, na mpaghara ogige na ime ugbo. Ọ ga -ekwe omume ịzụta ihe ọkụkụ sitere n'ubi kichin, yana The Green Barn, nke bụ ụlọ oriri na ọ organicụ organicụ, ụlọ ahịa nri nka, ebe a na -ere ahịa, yana ọtụtụ veranda. Kichin Stable Yard nke nwere Aga nke gị yana arịa nri zuru oke. Site na nhazi mbụ, enwere ike ịhazi nri abalị.
Gaa na: www.burtownhouse.ie
Kpọọ: 059 862 3865
Nwee ahụmịhe ọnụnọ Irish n'ezie na ọnọdụ a dị egwu na Obodo ezumike ezumike nke Robertstown. N'ịbụ nke na -ele Grand Canal, Robertstown Self Catering Cottages dị n'ime obodo dị jụụ nke Robertstown, na nso Naas na County Kildare na Irelands Midlands na mpaghara East Coast. Enwere ọtụtụ ihe na -atọ ụtọ ịme na ịhụ n'ime ebe a na Kildare. Nwee ọmarịcha ije, golf, ịkụ azụ, ụgbọ mmiri, nnukwu ụlọ ndị Irish, ubi na ihe ndị ọzọ niile n'ọnụ ụzọ gị. Ebe obibi a bụ naanị otu elekere iji ọdụ ụgbọ elu Dublin, ọdụ ụgbọ mmiri Dublins. N'ime Robertstown Onwe ụlọ nri ezumike ndị ọbịa na -ahụ ọmarịcha echiche nke ime obodo Ireland. Mpaghara ahụ nwere ọdịdị pụrụ iche na pụrụ iche site na Plains nke Curragh ruo Bog nke Allen. Nke a zuru oke maka ezumike ezinụlọ, ezumike ịhụnanya ma ọ bụ nnọkọ ezinụlọ. N'inwe ọtụtụ kilomita nke okporo ụzọ Canal iji ụkwụ na -agagharị, nnukwu njem ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ zuo ike na oche oche mmanya, Robertstown bụ ebe ịnọ. A na -enye ihe nnabata nnabata maka ndị ọbịa yana ego mgbazinye ego na nkwanye ugwu maka ebe nkiri mpaghara, yana kaadị VIP maka Kildare Village Newbridge Silverware.
Details: Ụlọ ndị a na -eri nri onwe ha na -arahụ ndị ọbịa 5 kacha n'ụlọ ọ bụla. Opekempe ọnụnọ bụ abalị 5 n'oge oge ọkọchị.
Ọnụahịa: June/July/August maka oge a bụ 550 XNUMX
Gaa na: www.robertstownholidayvillage.com
Kpọọ: 045 870 870
Ebe obibi ogige ogige Belan Lodge
Ụlọ ezumike Belan Lodge Onwe Onwe ya bụ akụkụ nke ọmarịcha ụlọ Belan House. Dị n'ime ogige akụkọ ihe mere eme emezigharị nke ụlọ ezumike ahụ na-enye ebe obibi dị mma n'akụkụ nnukwu ụlọ ọrụ ugbo nke narị afọ nke 17. Ala ahụ dị n'ime akụkọ ihe mere eme mgbe ochie ma ị nwere ike ịhụ mgbanaka ochie na Millrace mbụ na njem n'ime ụlọ ahụ. A na-eche na Ebenezer Shackleton tụpụrụ 300m ikpeazụ nke Millrace site na Osimiri Greese gaa na iyi dị nso. Ebe a na-eri nri nke onwe ha niile nwere kpo oku etiti yana stovu mmanụ ọkụ siri ike na ebe obibi ọ bụla ejirila echiche na ịchọọ ya mma n'otu n'otu na-enye ọmarịcha na ebe obibi, ma nwee mmetụta nke ugbu a. Nwee obi ụtọ ịgagharị n'ime ime obodo Kildare mara mma nke na-adịghị mma wee gbaga n'okporo ụzọ Moone High Crosse Inn maka nri ehihie na-atọ ụtọ. Achịcha na biya. Enwere ụlọ ezumike anọ dị maka ịgbazite, yana ma otu ọnụ ụlọ na nke abụọ dị na nha na nhazi dị iche iche.
Gaa na: www.belanlodge.com
Kpọọ: 059 8624846
Ezinụlọdi na nwunyeulo